Asan’ny Apostoly 27 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
Nandeha sambo ho any Roma i Paoly (1-12)
Tratran’ny tafio-drivotra ilay sambo (13-38)
Vaky sambo (39-44)
27 Tapaka ny hevitra fa halefa sambo ho any Italia izahay.+ Koa natolotra an’i Jolio, manamboninahitra avy amin’ny andia-miaramilan’i Aogosto, i Paoly sy ny gadra sasany. 2 Sambo avy tany Adramytena no niakaranay, ary efa hanainga ho any amin’ireo seranana teny amin’ny morontsiraky ny faritanin’i Azia izy io. Dia lasa izahay ary niaraka taminay koa i Aristarko,+ Makedonianina avy any Tesalonika. 3 Tonga tao Sidona izahay ny ampitson’iny. Tsara fanahy* tamin’i Paoly i Jolio, ka namela azy ho any amin’ny namany sy hokarakarain’izy ireo. 4 Niala tao indray izahay, ka nanaraka ny moron’i Sipra mba tsy ho azon’ny rivotra. Notoherin’ny rivotra mantsy izahay. 5 Dia nandeha teny afovoan-dranomasina izahay rehefa nandalo tandrifin’i Kilikia sy Pamfylia, ka tody tao amin’ny seranan’i Myra, any Lykia. 6 Tao dia nahita sambo avy tany Aleksandria ilay manamboninahitra. Ho any Italia izy io, ka nasainy niakatra tao izahay. 7 Dia nandeha niadana nandritra ny andro maromaro ilay sambo, ka sahirana izahay vao tonga tao Kinido. Ary nandalo tandrifin’i Salmona izahay, dia avy eo nanaraka ny moron’i Kreta mba tsy ho azon’ny rivotra, satria tsy namela anay handroso ny rivotra. 8 Sahirana izahay nanara-morona an’io tany io. Tonga teo amin’ny toerana atao hoe Seranana Kanto ihany anefa izahay. Teo akaikin’ny tanànan’i Lasea no nisy azy io. 9 Ary efa lasa be ny fotoana, ka efa nampidi-doza ny nandeha sambo, satria na ny andro fifadian-kanina amin’ny Andro Fandrakofam-pahotana+ aza efa tapitra. Nanoro hevitra azy ireo àry i Paoly 10 hoe: “Raha ny fahitako azy, dia ho voa mafy isika raha mbola manohy ny diantsika. Tsy hoe ny sambo sy ny entana fotsiny mantsy no ho simba, fa ny aintsika koa aza mety hafoy.” 11 Ny tenin’ilay mpitondra sambo sy ny tompon-tsambo anefa no narahin’ilay manamboninahitra, fa tsy ny tenin’i Paoly. 12 Koa satria tsy tsara hijanonana amin’ny ririnina ilay seranana, dia nanoro hevitra ny ankamaroan’ny olona hoe aleo miala ao, sao mba ho tonga hatrany Foiniksa ihany, dia any no hijanona mandritra ny ririnina. Seranan’i Kreta i Foiniksa, ary mitodika mianavaratra atsinanana sy mianatsimo atsinanana. 13 Rehefa nitsoka nalefaka ny rivotra avy any atsimo, dia nieritreritra izy ireo fa ho tonga any amin’ilay tanjony. Dia nampiakarina ny vatofantsika ary lasa izy ireo nanara-morona an’i Kreta. 14 Kelikely taorian’izay anefa dia nifofofofo namely an’ilay nosy ny rivo-mahery atao hoe Eorakylona.* 15 Dia nopaohin’ny rivotra ilay sambo, ary tsy nahatohitra an’ilay izy, ka navelanay hoentiny any amin’izay itondrany azy. 16 Nanaraka ny moron’ny nosy kely atao hoe Kaoda izahay mba tsy ho azon’ny rivotra, nefa saika mbola tsy vitanay ihany ny naka an’ilay lakan’aina* teo amin’ny vodisambo. 17 Rehefa tafakatra tao anaty sambo ilay lakana, dia nofatoran’izy ireo ny vatan’ilay sambo mba hanamafisana azy. Ary natahotra ny hidona tamin’ny dongom-pasik’i Sirtisy* izy ireo, ka nampidininy ny lay, dia nentin’ny rivotra ny sambo. 18 Mbola natsipitsipin’ilay tafio-drivotra anefa izahay, ka natao izay hahamaivana an’ilay sambo ny ampitson’iny. 19 Ary ny tanan’izy ireo mihitsy no nanary an’ireo fitaovana tamin’ilay sambo, tamin’ny andro fahatelo. 20 Efa andro maro no tsy tazana intsony na ny masoandro na ny kintana, ary nahery be* ny tafio-drivotra namely anay, ka tsy dia nanantena firy ny ho voavonjy intsony izahay. 21 Ary efa ela ny olona no tsy nihinan-kanina, ka nitsangana teo afovoan’izy ireo i Paoly, ary nilaza hoe: “Tokony ho narahinareo mihitsy ny teniko, ka tsy niala tany Kreta isika, dia tsy ho voa mafy hoatr’izao ary tsy ho simba ny sambo.+ 22 Fa mampirisika anareo aho izao mba tsy ho kivy,* satria tsy hisy hamoy ny ainareo ianareo, fa ny sambo ihany no hafoy. 23 Nisy anjelin’ilay+ Andriamanitra tompoko sady anaovako fanompoana masina mantsy nitsangana teo akaikiko tamin’ny alina, 24 dia niteny hoe: ‘Aza matahotra, ry Paoly, fa tsy maintsy hijoro eo anatrehan’i Kaisara ianao.+ Ary hitsimbina ny ainao Andriamanitra sady hitsimbina ny ain’izay rehetra miara-dia aminao ato anaty sambo.’ 25 Koa mahereza!* Mino aho fa hotanterahin’Andriamanitra tokoa izay nolazainy tamiko. 26 Tsy maintsy hidona amin’ny nosy iray+ anefa isika.” 27 Mbola natopatopan’ny Ranomasin’i Adria izahay ny alina faha-14. Tamin’ny misasakalina, dia tsinjotsinjon’ireo tantsambo fa nanakaiky tany anankiray izy ireo. 28 Norefesin’izy ireo ny halalin’ny rano ka hitany fa 36 metatra teo ho eo.* Dia nandeha kelikely izy ireo ka norefesiny indray, dia hitany fa 27 metatra teo ho eo.* 29 Ary natahotra izy ireo sao hidona amin’ny harambato izahay. Koa nalatsany ny vatofantsika efatra avy teo amin’ny vodisambo, ary tsy andriny izay hahamaraina ny andro. 30 Nitady handositra hiala tao amin’ilay sambo anefa ny tantsambo. Nampidinin’izy ireo ho eny an-dranomasina àry ilay lakan’aina, ka mody hoe handatsaka vatofantsika avy eo amin’ny loha sambo izy ireo. 31 Dia hoy i Paoly tamin’ilay manamboninahitra sy ny miaramila: “Raha tsy mijanona ato anaty sambo ireo olona ireo, dia tsy ho voavonjy ianareo.”+ 32 Notapahin’ny miaramila àry ny tadin’ilay lakana, ka navelany ho latsaka ilay lakana. 33 Rehefa nangiran-dratsy ny andro, dia nampirisika ny rehetra hihinan-kanina i Paoly. Hoy izy: “Anio no andro faha-14 niandrasanareo tao anatin’ny tebiteby sy tsy nihinananareo na inona na inona. 34 Koa mampirisika anareo hihinan-kanina aho satria hahasoa anareo izany. Fa tsy hisy ho very na singam-bolo iray eo amin’ny lohanareo aza.” 35 Rehefa avy nilaza an’izany izy, dia naka mofo, ary nisaotra an’Andriamanitra teo anatrehan’ny rehetra. Notapahiny ilay mofo avy eo ary nanomboka nihinana izy. 36 Dia tsy kivy intsony* ny rehetra ka nihinan-kanina koa. 37 Ary 276 ny isanay rehetra tao amin’ilay sambo. 38 Rehefa voky izy ireo, dia nariany tany an-dranomasina ny varimbazaha mba hanamaivanana an’ilay sambo.+ 39 Rehefa nazava ny andro dia hitan’izy ireo ilay tany, saingy tsy fantany hoe tany aninona io.+ Nahatazana helodranomasina misy torapasika anefa izy ireo, ka tapa-kevitra ny hampidona an’ilay sambo teo, raha vitany. 40 Notapahiny àry ireo vatofantsika dia navelany ho latsaka tany an-dranomasina. Novahany koa ny tady namatotra an’ireo fivoy familiana. Ary rehefa avy nampiakatra ny lay anoloana mba hotsofin’ny rivotra izy ireo, dia nandroso nankeny amin’ilay torapasika. 41 Nidona tamin’ny dongom-pasika saron’ny ranomasina anefa ilay sambo. Dia tafajanona teo ilay sambo ka nihitsoka ny lohany ary tsy nihetsika intsony, fa ny vodisambo kosa potipotiky ny onja.+ 42 Nanapa-kevitra àry ny miaramila fa hamono an’ireo gadra mba tsy hisy hitsoaka hilomano. 43 Tapa-kevitra ny hiaro ny ain’i Paoly anefa ilay manamboninahitra, ka tsy navelany hanatanteraka an’izay nokasainy ny miaramila. Nasainy nitsambikina tany an-dranomasina izay nahay nilomano mba ho tonga voalohany eny an-tanety. 44 Ary ny sisa kosa nanaraka, ka nitaingina hazo fisaka na nitaingina zavatra hafa avy tamin’ilay sambo. Dia tonga soa aman-tsara teny an-tanety izy rehetra.+
^ Na: “Noho izy tia olona, dia tsara fanahy.”
^ Izany hoe nisy rivotra avy any avaratratsinanana.
^ Izany hoe lakana kely azo ampiasaina mba hamonjena aina rehefa misy loza.
^ Abt: “tsy kely.”
^ Na: “mba hanana herim-po.”
^ Na: “manàna herim-po!”
^ Na: “20 refy.” Ilay “refy” resahina eto, dia mitovitovy amin’ny halavan’ny sandry roa mivelatra tsara. Jereo F.F. B14.
^ Na: “15 refy.” Jereo F.F. B14.
^ Na: “lasa nanana herim-po.”